बाबुरामले गरे खतरनाक भविष्यवाणी : अबको पाँच वर्षपछि ओली-प्रचण्डको नेकपा विघटन भएर जानेछ::KhojOnline.com
सुरुमा सुनौं ‘दक्षिणपन्थी खतरा’ र ‘अग्रगामी विकल्प’ का कुरा-
मैले नयाँ शक्तिको सम्भावना विश्वस्तरमै नै देखेको छु । वस्तुगत परिस्थिति अब बन्दै आएको छ । संकटहरु देखापरिराखेका छन् । नेपाल पनि अब अर्को विन्दुमा विस्तारै जान्छ । तर, खतरा मैले कहाँ देखिराखेको छु भने हामी जुन पृष्ठभूमिबाट आयौं, -जस्तै-माओवादी आन्दोलनबाट आयौं) त्यसलाई मात्रै हेरिदिने र नयाँ युवापुस्ता राजनीतिक-वैचारिकरुपमा प्रष्ट नहुने । खाली नयाँ हुनुपर्छ मात्रै भन्ने । यसले गर्दा दायाँतिर जान्छ कि भन्ने खतरा छ ।
जस्तो- अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँका ह्वाइट युवाहरुलाई लिएका हुन् । पाकिस्तानमा अहिले इमरान खान आएका छन् । उनलाई पनि पाकिस्तानका डोनाल्ड ट्रम्प भनिँदैछ । उनले पनि ‘राइटिस्ट एप्रोच’ बाटै नयाँ विकल्प बनाएका हुन् । इमरान खानहरु २२/२६ वर्षपछि सरकारमा आएका हुन् । हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने खतरा देख्दैछु । यद्यपि नेपाली समाजमा विविधता छ । नयाँ विकल्पको निर्माण भावना र आवेगले मात्रै हुँदैन, विचार र राजनीति चाहिन्छ ।
तपाईको विश्लेषणमा अबको ५ वर्षपछि नेकपाको बहुमत आउँछ कि आउँदैन ?
नेकपा आफैं कहाँनेर अन्तरविरोधमा परेको छ भने कम्युनिष्ट पार्टीको ढाँचा नै केन्द्रीकृत हुन्छ । जनवादी केन्द्रीयता र अग्रदस्ताको अवधारणा भनेकै केन्द्रमुखी अवधारणा हो । हाम्रोजस्तो भर्खरै सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फ अगाडि बढिराखेको देशमा त्यो केन्द्रीयतावादी सोचले लोकतान्त्रिक चरित्र धेरै ग्रहण गर्न सक्दैन । यसले समाजमा लोबकतन्त्रको विकास गर्ने भन्दा पनि सत्तामा पुगेका मान्छेलाई अझ बढी भ्रष्ट बनाउने खतरा रहन्छ ।
दोस्रो कुरा, नेपालजस्तो विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा केन्द्रीयतावादी सोच रह्यो भने यसले समाजको विविधतालाई नस्वीकार्ने ढंगले जान्छ ।
तेस्रो, आर्थिक हिसाबले पनि नेपाल लामो समयदेखि निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित छ र यहाँ व्यक्तिको निजी उद्यमशीलताको विकास नभएको र बजारसँग अर्थतन्त्र नजोडिएको आदि कारणले गर्दाखेरि निजी उद्यमशीलता छैन । नेपालको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकासको आवश्यकता छ ।
तर, परम्परागत कम्युनिस्ट विचारले राज्यले नै सबै हस्तक्षेप गर्ने कुरा गर्छ र निजी उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दैन । यसले गर्दा नेकपामा दुई/तीनवटा गम्भीर प्रकारका अन्तरविरोधहरु रहेका छन् । यस अर्थमा यो नेकपाले संरचनात्मक ढंगले नै आफूलाई रुपान्तरण नगरेसम्म पुरानै ढाँचामा रहेर यसले देशका समस्याहरु हल गर्न सक्दैन । र, आगामी ५ वर्षसम्म यसभित्र अन्तरनिहीत जुन अन्तरविरोधहरु छन्, यिनै अन्तरविरोधहरुकै कारणले गर्दा यो आफैंभित्रबाट विघटनतिर जान्छ ।
के त्यसपछि फेरि नेपाली कांग्रेस नै विकल्पका रुपमा सत्तामा आउँछ ?
कांग्रेस त यो भन्दा पनि पुरानो विचारको भैहाल्यो । उसले व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको जुन कुरा गर्छ, त्योदेखि बाहेक नेपाली समाजको अन्तरविरोधलाई हल गरेर अझै उन्नत दिशातिर जाने अनि विकास र समृद्धिको नयाँ सोच अगाडि सार्ने सम्भावना छैन । देशको विविधतालाई समेटेर उन्नत प्रकारको समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अनि भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त समाज स्थापना गर्नमा कांग्रेसको कुनै प्रोग्राम पनि छैन र यी विषयहरुमा ऊ असफल भएसकेको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस अब कांग्रेसकै रुपमा विकल्प हुन सक्दैन ।
कांग्रेस र कम्युनिष्ट ब्राण्ड जो हिजो थिए, अब त्यो ब्राण्डले काम गर्दैन । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुईवटै ब्राण्डबाट अब देशको समस्या समाधान हुन सक्दैन । नयाँ विकल्पतिरै समाज जान्छ । खाली यो विकल्प अग्रगामी प्रगतिशील विकल्प हुने कि कस्मेटिक खालको मात्रै वा दक्षिणपन्थी विकल्प हुने भन्नेमा मात्रै आगामी दिनमा बहस केन्दि्रत हुन्छ ।
तर, विगतमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले राम्रो काम नगर्दा दरबारिया शक्तिहरु आउने गरेका थिए, अब फेरि त्यो शक्ति आउँछ ?
अब त सामन्तवादी युगै अन्त्य भइसकेको हुनाले कमल थापाको राप्रपा वा राजतन्त्र, हिन्दुत्व, संघीयताविरोधी एकात्मक राज्य जस्ता कुराहरु गरेर कुनै पनि शक्ति अगाडि आउन सक्दैन । सामन्तवादी युगको त अन्त्य नै भइसक्यो । अब को दक्षिणपन्थ कस्तो हुन्छ भने त्यसले खाली कस्मेटिकखालको मात्रै कुरा गर्ने ।
तपाईले लक्षित गर्न खोज्नुभएको विवेकशील पार्टीलाई हो ?
कसैको नाम त म लिन चाहन्न । तर, विचार, राजनीति र नीति-कार्यक्रममा केन्दि्रत नभइकन खाली धुलो र हिलोका कुरामात्रै गरेर मात्रै सही अग्रगामी विकल्प तयार पार्न सकिँदैन ।
अहिलेको विकल्प लाखौं युवाहरु विदेशिनुपरेको छ, त्यसको विकल्प दिन सक्नुपर्छ । र, हिमाल पहाड तराईको जुन विविधता छ, तिनीहरुवीचको बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने विकल्प दिन सक्नुपर्छ । यो नदिइकन जनताको भावनामात्रै दोहन गरेर दिने विकल्प नेपालको सन्दर्भमा दक्षिणन्थी र यथास्थितिवादी विकल्प हुन जान्छ ।
अनलाइनखबरसँगकाे कुराकानिकाे सानाे अंश ।